नेपाली बजारमा बजाज कम्पनीले १२५ सीसीको नयाँ मोटरसाइकल ल्याउँदै , कति पर्छ त नेपाली पैसा ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाली बजारमा बजाज कम्पनीले १२५ सीसीको नयाँ मोटरसाइकल ल्याउँदै , कति पर्छ त नेपाली पैसा ?
नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने दुई पाङ्ग्रे सवारीमध्ये बजाज कम्पनीको पल्सर मोटरसाइकल पनि एक हो ।
बजाजको पल्सर मोडलमा अहिले १५० सीसीभन्दा माथिको क्षमताका मोटरसाइकल मात्रै नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । तर, बजाजले अब १२५ सीसीमा पनि पल्सर मोटरसाइकल उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । र, संवततः सन् २०१९ को अन्ततिर नेपालमा पनि यसको बिक्री शुरु हुन सक्छ ।
बजाज पल्सर (एनएस) को बिक्री गत वर्ष पोल्याण्डमा शुरु गरिएको थियो । प्रयोगकर्ताको राम्रो प्रतिक्रिया पछि बजाजले यसको बजार विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
संभवतः आगामी सेप्टेम्बर महिनासम्म यो मोटरसाइकल भारतीय बजारमा लञ्च हुने छ । भारतीय बजारमा पल्सर एनएस १२५ लाई एक प्रतिक्षित मोटरसाइकलको रुपमा हेरिएको छ ।
स्पोर्टी लुक्स र दमदार (परफर्मेन्स)का कारण खास गरी युवा पुस्तामा बजाज कम्पनीको पल्सर लोकप्रिय छ । तर, समान सेग्मेन्ट्सका अन्य कम्पनीका मोटरसाइकलभन्दा केही महंगो भएकाले युवाहरुले बजाजप्रति आकर्षित हुँदा हुँदै पनि मूल्यका कारण सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसोभए अब आउने पल्सर एनएस १२५ मूल्यका हिसाबले केही सस्तो होला त ? पक्कै पनि यसको इन्जिन क्षमताका हिसावले अहिले बजारमा उपलब्ध पल्सर एनएस १६० र २०० को तुलनामा यसको मूल्य केही कम हुने नै छ । तर, धेरै कम भने हुने छैन ।
पोल्याण्डमा लञ्च भएको यो मोटरसाइकलको मूल्य ७ हजार ९ सय ९९ (पोलिश ज्लटी) तोकिएको छ । जसअनुसार भारतमा यसको मूल्य १ लाख ४६ हजार भारु हुन आउँछ । तर, भारतीय अटोमोबाइल विश्लेषकहरुले भने पल्सर एनएस १२५ भारतीय बजारमा १ लाख भारुको आसपासमा (अन रोड) उपलब्ध हुने आकलन गरेका छन् ।
यस हिसावले नेपाली बजारमा यो मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख ७० हजार रुपैयाँको आसपास हुने छ ।
यो मोटरसाइकलमा १२४.४५ सीएम क्यूब (सीसी) क्षमताको सिङ्गल सिलिण्डर फ्यूल इन्जिक्टेड इन्जिन प्रयोग गरिएको छ । उक्त इन्जिनले ८५०० आपीएममा १२ हर्ज पावरको म्याक्सिम पावर जेनेरेट गर्ने छ ।
मोटरसाइकलको इन्जिनमा ५ ओटा गियर बक्स उपलब्ध हुनेछन् ।
यो मोटरसाइकलको डिजाइन हेर्दा पल्सर १३५ एलएसबाट धेरै कुरा सारिएको महसूस गर्न सकिन्छ । यद्यपि केही ग्राफिक्स र कलर भने पल्सर एनएस २०० बाट पनि सारिएको छ ।
यो बाइकको कूल तौल १२६.५ किलोग्राम हुने छ । यसमा १३२५ एमएमका टायर प्रयोग गरिएको हुने छ ।
यो मोटरसाइकलको लम्बाइ १९९५ एमएम, चौडाइ ७६५ एमएम, उचाइ १०५४ एमएम छ । यसको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १७० एमएमको रहेन छ । साथै मोटरसाइकलमा १०.५ लिटर क्षमताको पेट्रोल ट्याङ्की उपलब्ध हुने छ ।
टिकट काटेर युएईबाट नेपाल फर्कन किनमेल गर्न गएकी २३ वर्षीया शुकुमायाको निधन, ४ बर्षिया छोरी र परिवार भेट्ने सपना अधुरै !